Soo -saaraha iyo Warshadda Taxanaha Baaritaanka Daaqadda ugu Fiican | Dijing
Daaqadda isku-dhafan ee shaashadda waxay leedahay iska caabin aad u weyn, ka-hortag, xatooyo, kaneecada ka-hortagga, iska-caabbinta heerkulka sare, dab-damiyaha, iwm, xoog sare, adayg adag; iyo midabka dusha sare waa mid dhalaalaya oo qurux badan, kaas oo si fiican u kordhin kara heerka wareegga hawada iyo iftiinka qorraxda; Kaneecada ka hortagga xatooyada iyo ka-hortagga xatooyada ayaa lagu rakibay albaabbada iyo daaqadaha aluminium si ay uga dhigaan kuwo isku dhafan. Marka la barbardhigo cilladaha daaqadaha caadiga ah sida kulaylka dhaqsaha badan iyo keydinta tamarta, shaashadda daaqadda isku dhafan oo ay naqshadeysay shirkaddeennu waxay si wax ku ool ah u horjoogsan kartaa wareejinta kulaylka bannaanka daaqadda ilaa daaqadda, sidaas oo kale waxay door ka ciyaari kartaa badbaadinta tamarta xagaaga kulul. Isla mar ahaantaana, muraayadda la isticmaalay ayaa iyaduna leh hawl ay ku horjoogsanayso falaadhaha infrared -ka fog ee qorraxda. Daaqadda shaashadda isku-dhafan ee noocan ahi waa albaab iyo daaqad tamar-badbaadin ah oo dhab ah.
1. Qurux badan oo deeqsi ah. Si looga hortago kaneecada iyo xatooyada daaqadaha dhaqanka caadiga ah, daaqado iyo shaashado ilaalin oo dheeraad ah ayaa loo baahan yahay in la rakibo, taas oo keenta fowdada guud ee albaabada iyo daaqadaha waxayna saamaysaa bilicda qurxinta. Shaashadda daaqadda ee isku dhafan waxay isku daraysaa daaqadaha tamarta badbaadiya, daaqadaha difaaca, iyo daaqadaha shaashadda guud ahaan, waxayna leedahay habab kala duwan oo furitaan. Hababka laba-midab ee gudaha iyo dibaddaba waa la is waafajin karaa si aan kala sooc lahayn, taas oo runtii qurux iyo deeqsinimo leh.
2. Dahaarka kulaylka iyo keydinta tamarta. Muraayadda dahaarka leh ee tayo sare leh ayaa loo isticmaalaa si looga hortago qabowga iyo diirimaadka iyadoo la yaraynayo faragelinta qaylada qolka. Waxay leedahay dahaarka dhawaaqa oo aad u fiican, dahaarka kuleylka iyo howlaha ilaalinta kuleylka, waxayna keydisaa kharash badan oo kuleylinta iyo qaboojinta. Kharashaadka tamar-badbaadinta ee dhowr sano oo shaashadaha daaqadaha ah ayaa ku filan in lagu kabo maalgashiga bilowga ah.
3. Ka-hortagga kaneecada iyo hawo-qaadista. Shaashadaha isku-dhafan ee is-dul-simbiriirixaya iyo dhinac-ka-furan waxay ku habboon yihiin dabaqyada sare iyo kuwa hooseeya waxayna leeyihiin aalado ammaan ah. Ka sokow hawo -qaadista iyo ka -hortagga kaneecada, daaqadaha shaashadda ayaa sidoo kale ka hortagi kara dabayshu inay qashinka ama qashinka ku soo gasho guriga, oo si habboon loo go'doomiyo, taasoo ka dhigaysa jawiga guriga mid nadiif ah oo ku habboon caafimaadka jirka iyo maskaxda.
Xiga: Taxane Albaabka Swing Bridge Swing